Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बगर बनेको खेतमा बाढीपीडितले १२ बर्षपछि धान फलाए – Emountain TV
डडेल्धुरा, ३१ भदौ । डडेल्धुरा पर्शुराम नगरपालिका ६ सिमलखेतका वाढीपीडितहरुले बगरमा परिणत भएको आफ्नो खेतमा १२ वर्षपछि धान फलाउन पाउँदा खुशी भएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पर्शुराम नगरपालिकाको रंगुन नदीमा तटवन्ध निर्माण गरिएपछि सिमल खेतका वाढीपीडितले वगरमा धान फलाउन थालेका हुन् ।
डडेल्धुराको धान उत्पादनको भण्डार मानिएको सिमल खेत १२ वर्ष पहिले रंगुन नदीमा आएको वाढीले वगरमा परिणत गरेको थियो । वाढीले खेतवारीलाई वगरमा परिणत गरेपछि सामुदायिक जंगलमा वस्दै आएका वाढीपीडितहरु आफ्नै पुरानो थातथलोमा आएर धान खेती लगाएका छन् ।
रंगुन नदीमा तटवन्ध निर्माण संगै १२ वर्ष पछि आफ्नै खेतमा धान खेती फलेको देख्दा वाढीपीडितहरु हर्षित भएका छन् ।
बगरमा धान खेती गर्नुका साथै गाईगोरु, कुखुरा पाल्न थाले संगै वाढीपीडितहरुलाई जिविकोपार्जनका लागि सहज भएको छ । पर्शुराम नगरपालिकामा रहेका वाढीपीडितहरुको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पर्शुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिमबहादुर साउदले बताउनु भयो ।
रंगुन नदीमा तटवन्ध निर्माणसंगै दशकाैंसम्म जंगलमा बस्दै आएका सिमल खेत सहित वडा नम्वर ६ कै सरकौडा, ठण्डजलाका वाढीपीडितहरु पनि आफ्नो जमिन खोज्दै पुरानो थातथलो फर्किन थालेका छन् ।
रंगुन नदीको कटान रोक्नका लागि गुरुयोजना बनाएर रंगुन नदीमा २३ किलोमिटर तटवन्ध निर्माण गर्ने काम द्रुत गतिमा भईरहेको पर्शुराम नगरपालिकाले जनाएको छ । रंगुन नदीमा २०६४ सालमा आएको वाढीबाट सिमल खेतका ३ सय घर परिवार विस्थापित भएका थिए भने हजाराैं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत भएको थियो ।